Otu esi agbaji ekwentị gị dịka ụlọ ọrụ gị siri kwuo
Anyị na-ebi n'ụwa ebe nzikọrịta ozi aghọwo ihe dị mkpa, nke mere na anyị na-ejikọ oge niile site na kọmputa, mbadamba na karịsịa ekwentị mkpanaaka.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-ahọrọ ịkwụ ụgwọ ịntanetị akwụ ụgwọ dị larịị, ndị ọzọ na-ejikwa obere nkeji oge na-achịkwa nguzozi ha site n'oge ruo n'oge, n'ọnọdụ ọ bụla, ịchaji ka bụ usoro dị mkpa maka onye ọ bụla.
Companieslọ ọrụ nkwukọrịta na-enye gị ụzọ dị iche iche iji fanye ekwentị mkpanaaka, ị nwere ike fanye itule ekwentị gị n'ịntanetị, site na oku ma ọ bụ n'onwe gị site na ịgakwuru ndị nnọchi anya ikike.
Anyị na-agwa gị ihe niile banyere ekwentị recharges nke isi ụlọ ọrụ n'ime na n'èzí Spain.
Bulite ekwentị n'ịntanetị
Ugbu a, ọ ga-ekwe omume ịjinye nguzozi mkpanaka gị site na ntụsara ahụ nke ụlọ gị ma ọ bụ rụọ ọrụ site na enyemaka nke kọmputa nwere ịntanetị.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ nkwukọrịta na-enye gị ohere ijikwa chaja mkpanaka gị n'ụzọ dị otú a, ọ bụghị naanị na Spain, mana n'ebe ọ bụla n'ụwa n'ime naanị sekọnd.
Ọrụ iji fanye ekwentị n'ịntanetị dị mfe, naanị gaa na webụsaịtị onye ọrụ mkpanaka, dee nọmba ekwentị na nguzozi iji fanye.
Site na usoro a, ị nwere uru nke ịchekwa oge dị ukwuu nke ị nwere ike iji mee ihe ndị ka mkpa.
Ị nwekwara ike tinye ego gị site na mkpanaka gị. Ị ga-enwe naanị otu kọmputa nwere ohere netwọk. N'ozuzu, ngwa a bụ n'efu ma dị maka iOS (na App Store) na gam akporo (na Google Play), budata ya na fanye ekwentị gị mgbe ọ bụla ịchọrọ.
Nweta nguzozi mkpanaka
Ọ bụ ezie na ụzọ kachasị mfe iji bulie elu bụ ịntanetị, enwekwara usoro ọdịnala iji zụta kredit. Enwere ike ịgbanye ya site na:
Ozi ederede (SMS)
Ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ ikike
Ọrụ nchaji akpaaka
Nyefe nha nha
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ dị iche iche na usoro ahụ, ha niile na-ejikọta na nzube ha: iji mejupụta nguzozi.
Ọzọ, anyị na-ahapụrụ gị ndepụta ka ị nwee ike mụta n'ụzọ zuru ezu usoro nke ịchaji ekwentị na ndị ọrụ ekwentị kacha mkpa na Spain:
Otu esi agbaji Oi Brazil
Bugharịa Express TV
Nweta kaadị Paysafecard
Bulite kaadị akwụgoro ụgwọ akwụkwọ postpay
Etu esi akwụ ụgwọ Iliad
Nchaji Telekom akwụgoro goro
Omenala Nuri kaadị ịchaji
Lelee nguzozi mkpanaka Anyị na-akọwa otu esi eme ya site na nzọụkwụ!
Fanye Claro Argentina
Bulite ekwentị mkpanaaka Jazzpanda
Fanye ekwentị mkpanaaka dijitalụ
Tinye Cubacel ekwentị mkpanaaka
Fanye ekwentị mkpanaaka Pepephone
Kedu otu esi etinye ego na República Móvil?
Fanye ekwentị mkpanaaka akwụgoro ụgwọ MásMóvil. Ọnụ ego
Bulite ekwentị site na ụlọ akụ gị
Ọ bụ ezie na mmadụ ole na ole maara ya, ụlọ akụ na-enyekwa ọrụ nke ịchaji nha ekwentị n'enweghị nsogbu. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-esonye na-eme ka ọrụ ịkwụ ụgwọ ndị a dị mfe nye ndị ahịa ha.
Ụlọ akụ ọdịnala na Spen na-enye ọrụ a ruo oge ụfọdụ. Agbanyeghị, ụlọ akụ ndị ọzọ na-eto eto etinyebeghị teknụzụ a na sistemụ ha. Ka anyị hụ n'okpuru nke bụ ụlọ akụ kacha dịrị nchebe iji fanye nguzozi mkpanaka gị.
Ọtụtụ ụlọ akụ na-enyekwa ọrụ ụlọ akụ ekwentị mkpanaaka. Site na ya, ị nwere ike fanye nguzozi gị n'agbanyeghị ebe ịnọ, site na nkasi obi nke ekwentị gị. N'ozuzu, ndepụta nke ndị na-arụ ọrụ mkpanaka nwere ike ịchaji n'okpuru usoro a dị nnọọ ukwuu, nke mere na ọ dịghị onye ọ bụla na-ahapụ.
Bulie Hype kaadị akwụgoro
Bulite Aldi Talk
Jiri kaadị bulie ekwentị mkpanaaka
Fanye ekwentị BBVA
Fanye ekwentị Santander
Bulite ekwentị site na ING
Fanye ekwentị La Caixa
Fanye ekwentị mkpanaaka na mpụga Spain
Ugbu a ịchaji ekwentị mkpanaaka na mpụga Spain dị nnọọ mfe. Mgbe ị na-eme njem na mpụga Spain, ị nwere ike ịga n'ihu na-esoro ezinụlọ na ndị enyi na-ekwurịta okwu n'enweghị nsogbu ọ bụla. Taa, e nwere ndị na-arụ ọrụ ekwentị dị iche iche n'ahịa na-enye ọrụ a nke ọma.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere ndị enyi na ezinụlọ nọ na mba ndị ọzọ, ị nwekwara ike iziga ha nguzozi site na ịkwụ ụgwọ na euro. Ụzọ kacha mma iji fanye ekwentị gị na mba ofesi bụ site na webụ, iji kọmputa gị ma ọ bụ budata ngwa na ekwentị mkpanaaka gị.
Enwekwara ebe ihu na ihu na-enye gị ohere ịkwụ ụgwọ kredit na ekwentị mkpanaaka na mba ndị ọzọ. Oghere ma ọ bụ ụlọ ọrụ ebe ọrụ dị bụ: ebe oku, kiosks, ọrụ onwe ma ọ bụ ụlọ ahịa.
Anyị maara na ịpụ na ndị ị hụrụ n'anya nwere ike isi ike, mana ekele maka anwansi nke nkwukọrịta ị nwere ike inwe mmetụta dị nso na ha. N'ebe a, anyị na-egosi gị ọtụtụ nhọrọ iji soro ndị ị hụrụ n'anya na-akpakọrịta.
Fanye ekwentị site na Peru
Fanye ekwentị mkpanaaka sitere na Chile
Bulite ekwentị na Mexico
Tinyegharịa ekwentị gị na Venezuela
Fanye ekwentị na Ecuador
Bulite ekwentị site na Bolivia
Bulite ekwentị na Colombia
Fanye ekwentị Rebtel na-enweghị ọrụ
Fanye ekwentị Telcel ngwa ngwa na ngwa ngwa
Fanye Suop mobile mfe na ngwa ngwa
Fanye Soriana mkpanaka
Bulite ekwentị site na Dominican Republic
Bulite ekwentị na Cuba
Ụzọ ndị ọzọ dị iche iche iji fanye ekwentị mkpanaaka
Nhọrọ iji fanye nguzozi nke ekwentị mkpanaaka gị kwa ụbọchị ka ukwuu. Ndị na-ahụ maka ekwentị na-enye gị ụzọ dị iche iche iji fanye ekwentị mkpanaaka, mgbe ị nweghị ohere na netwọk. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ ikike na-enye ọrụ nchaji maka ndị ọrụ ekwentị dị iche iche ma ọ bụ ụlọ ahịa ebe ị nwere ike ịzụta kaadị akwụgoro ụgwọ.
Kaadị akwụgoro akwụgoro na-abịa na ego dị iche iche na-enye gị ohere ịhọrọ ọnụọgụ ego ịchọrọ ịbanye ahịrị ekwentị gị. Iji ha dị mfe, chọọ naanị koodu mgbakwasa na fanye ntuziaka na azụ.
Fanye ma ọ bụ zụta kaadị akwụgoro ụgwọ na: kiosks, post ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa, ụlọ ahịa pụrụ iche, ọdụ mmanụ ụgbọala, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ njem, ebe oku, wdg.
Ekwentị mkpanaaka na-akparaghị ókè
Enwere ọnụego na-enye ndị ọrụ ha ohere chọgharịa na budata na-akparaghị ókè. N'ahịa, e nwere ndị na-arụ ọrụ na-enye gigabytes na-akparaghị ókè ma ọ bụ nwere nnukwu data, na-edobe n'ọtụtụ ọnọdụ otu ọsọ nchọgharị ahụ.
N'ozuzu, ụdị ọnụego ndị a nwere ike ịbanye n'ime ngwugwu. Na Spain ụfọdụ ụlọ ọrụ na-enye igodo na-enweghị ngwụcha ma ọ bụ enweghị oke bụ: Vodafone na Yoigo. Ihe kachasị mma bụ na ị nwere ike iji ha mee ihe na mba ndị ọzọ nke European Union.
E nwekwara ndị na-arụ ọrụ na, ọ bụ ezie na ọnụego ha na-akparaghị ókè, nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu fọrọ nke nta na-akparaghị ókè gigs ka ịnyagharịa nwayọ n'ọnwa niile. N'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ bụ: Movistar, Orange, Simyo, Lowi, MásMóvil na República Móvil.
Ọnụ ahịa n'etiti ọnụego dịnụ ga-adịgasị iche dịka data nke ụlọ ọrụ ekwentị nyere. Ndị a sitere na oke ruo na ihe nchọgharị na-akparaghị ókè ruru 50 Gb. Ihe ngwọta maka ndị ọrụ na-eji ịntanetị eme ihe ike.
Bulite Mobile 2022 - Otu esi agbaji ekwentị gị site na nzọụkwụ